ဘယ်လိုသတ္တ၀ါလေးလဲ...? — MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော်တို့ ရုံးက စက်တွေမှာ ၀င်နေတဲ့ အကောင်တစ်ကောင်ပါ...
Virus လား, Trojan လား .. ဘယ်လိုနာမည်တပ်ရမလဲတော့ မသိဘူးဗျာ...
အွန်လိုင်းပေးမသုံးတော့ Windows ရဲ့ Messenger ဆားဗစ်ကနေ Internal Communication အတွက် သုံးပါတယ်... အဲဒီကနေပြန့်တတ်သလားတော့ မသိဘူးခင်ဗျ...
သူက စက်ရဲ့ ဖိုဒါတိုင်းမှာ readme.eml တို့ ၊ နောက်တစ်ခါ စက်ရဲ့ hostname.eml စသည်ဖြင့် ဖိုင်တွေအများကြီး၀င်နေတယ်...
စက်တစ်လုံးဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စစ်လိုက်တော့ တင်ထားတဲ့ Application မှန်သမျှရဲ့ EXE ဖိုင်မှန်သမျှကို Antivirus က ဗိုင်းရပ်ပါဆိုပြီး သတ်ပဲ သတ်ခိုင်းနေတယ်... အဲဒါနဲ့ အရင် Avast နဲ့ စစ်ကြည့်တယ်... မဖျက်ပစ်သေးပဲ Avast ကို ဖြုတ်ချပြီး NOD32 နဲ့ ပြန်စစ်တော့လည်း အတူတူပဲ... EXE မှန်သမျှကို ဗိုင်းရပ်ဆိုပြီး သတ်ခိုင်းတယ်...
ဗိုင်းရပ်မသတ်သေးပဲ စက်ရဲ့ Driver အခွေမရှိလို့ Driver Backup လုပ်ပြီး ၀င်းဒိုးအသစ်တင်လိုက်တယ်... နောက်တစ်ခြား Application တွေတင်ပြီး Antivirus နဲ့ Scan ပြန်စစ်တော့ အသစ်တင်ထားတဲ့ Application မှန်သမျှ ခုနလိုပဲ EXE ဖိုင်မှန်သမျှအကုန်လုံးကို Virus Alert တက်လာတယ်.... ဘာဆော့၀ဲလ်မှ သုံးမရတော့ဘူး... မထူးတော့တာနဲ့ စက်ထဲရှိသမျှ .exe ဖိုင်မှန်သမျှ အကုန် စစ်.. ဖျက်ပြီးတော့မှ ဖောမတ်ချ.. ၀င်းဒိုးပြန်တင်လိုက်ရတယ်...
နောက်အလုံးတွေမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ Messenger ဆားဗစ်တွေ အကုန် Disabled လုပ်ထားသော်လည်း...
ဒီလိုမက်ဆေ့ချ်တွေပဲ ခဏ ခဏ တက်နေတယ်... ဘယ်လိုရှင်းရမလဲ.. ကူညီကြပါဦးဗျာ...
:2: အကောင်သေးပေမယ့် မခေဘူးနော် . ဘာ virus ဆိုတာအသေးစိတ်သိရရင်ကောင်းမှာပဲ :2:
ကျွန်တော် google ကြီးနဲ့စကားပြောကြည့်တော့
အဲသဟာလေးနဲ့ရတယ်လို့ပြောတာပဲဗျ။ စမ်းကြည့်ပေါ့။ မရရင်နည်းလမ်းထပ်ရှာပေးပါ့မယ်။
ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို... အစ်ကိုပြောတဲ့ လင့်ကတော့ဟုတ်ဘူး .. တစ်ခြားဆိုက်တစ်ခုက Nimda Remover တစ်ခုဒေါင်းပြီး ကစ်ကြည့်တာတော့ စက်လည်း Restart လုပ်ပြီး ပြန်တက်လာရော explorer.exe က Run ကို မ Run လာတော့ဘူး...
Screen ပြောင်ချည်းပဲ တက်လာတယ်.. Task Manager ကနေ New Task နဲ့ explorer.exe ကို ခေါ်လိုက်တော့ My Documents ကြီးပဲ တက်လာတယ်... Icon တွေကော .. Taskbar ကော ဘာမှကိုမပေါ်လာတော့တာခင်ဗျ.. အဲဒါနဲ့ System Restore ပြန်လုပ်ပြီး Antivirus ဆော့၀ဲလ် နဲ့ Scan စစ်ကြည့်တော့ ... Exe ဖိုင်မှန်သမျှ အကုန် ဗိုင်းရပ်ပါဆိုပြီး ကစ်မယ်တကဲကဲ လုပ်နေတော့တာနဲ့ ထူးပါဘူးဆိုပြီး သတ်ခိုင်းပြီး ဖောမတ်ပြန်ချလိုက်ရတယ် အစ်ကိုရေ...
အစ်ကိုပေးတဲ့လင့်ကဟာလေး ဒေါင်းပြီး တစ်ခြားတစ်လုံးလာပို့ရင် စမ်းကြည့်ဦးမယ်..
ဒီအကောင်ကိုပဲ သတ်နည်းတော့ သိထားမှဖြစ်မယ်ထင်တယ်.. နောက်စက်တွေ လာသမျှသာ ဒီလိုလုပ်ရရင်တော့ စက်တွေထဲရှိသမျှ Program မှန်သမျှ ကုန်ပါပြီ ...
worm တစ်မျိုးလို ့ယူဆရပါတယ် အရင်တုံးကပုံစံမျိုးတွေပါ ဘယ်လိုသတ်ရမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျ
ဟိုဖက်နေ့က စက်ကတေ့ာ ဖောမတ်ချလိုက်လို့ နားတော့အေးသွားပြီ...
ဘာကောင်မှကိုကျန်တော့ဘူး.. မကျန်ဦးမှပဲလေနော.. စက်ထဲရှိသမျှ Program တွေလည်း ပြောင်ပါလေရောကို...
Wiki နဲ့ F-Secure မှာကြည့် တော့ကြည့်ထားတယ်.. အဲဒီအကောင်အောင်းနေတဲ့ နောက်ထပ်စက်တွေလာပို့မှ အဲဒီမှာ ဖတ်ထားတဲ့နည်းလေးတွေ နဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်...
ကူညီခေါင်းစားကူကြတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေအကုန် ကျေးဇူးပါ...
စိတ်၀င်စားတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေအတွက် ...
F-Secure မှာတော့ Tool တစ်ခုထုတ်ပေးထားသလို ကိုယ့်လက်နဲ့မှသတ်ချင်ရင်လည်းသတ်လို့တော့ ပြောထားတာပါ... မစမ်းလိုက်ရဘူး...
နောက်ထပ်အဲလိုဖြစ်နေတဲ့ စက်တွေလုပ်ပေးရရင် ဒီနည်းလေးတွေနဲ့အဆင်ပြေမပြေပြောပြပါမယ် ညီအစ်ကိုတို့ရေ...